(Waxaa laga soo toosiyay Saylac زيلع)
Dhacdaa: 11°21′14″N 43°28′26″E﻿ / ﻿11.35389°N 43.47389°E﻿ / 11.35389; 43.47389Isuduwe: 11°21′14″N 43°28′26″E﻿ / ﻿11.35389°N 43.47389°E﻿ / 11.35389; 43.47389
Saylac (Af-Carabi: زيلع; Af-Ingiriis: Zeila ama Zaila) waa magaalo xeebeed taariikhi ah oo ku taala Gobolka Awdal waqooyiga dalka Soomaaliya. Magaalada waxay ku taalaa waqooyi-bari Gobolka Awdal, waxayna aad ugu dhowdahay wadanka Jabuuti oo u jirto ilaa 120 km. Magaalada Seylac oo ah mid qadiimi ah oo aad u taariikh dheer ayaa wakhti xaadirkan magaalo-madax u ah gobolka Selel oo ah gobol cusub ooy magacaabtey dowlada Somaliland. Seylac waxaa loo aqoonsan yahay ineey jirtey tan iyo wakhti ka horeeysay soo bixitaanka diinta Islaamka, midaasi oo ah goobaha ugu taariikhda dheer qaarada Afrika, iyada oo ay ku yaalaan meelo fara badan oo taariikhi ah hase yeeshee ka turjumaaya taariikhda geeska Afrika gaar ahaan tan Soomaalida. Waxa laga soo xigtey sahamiyayaal Roman iyo Giriig ah in qarnigii 1aad Sey|lac dhisneyd isla markaana lahayd maamul caasimadeed iyo hogaan heer sare ah. Tan iyo horaantii soo bixitaanka diinta Islaamka magaalada Seylac waxay ahayd hooy waxbarasho, ganacsi, dhaqan, ilbaxnimo, xadaarad iyo maamul boqortooyo. Qiyaastii qarnigii 7aad ilaa 8aad ayaa diinta Islaamku ku soo fidey magaalada Seylac oo wakhti kooban ku noqotay hooyga diinta ee guud ahaan qaarada Afrika, gaar ahaan gobolka geeska Afrika.
3 Siyaasada iyo Maamulka
3.1 Muuqaalo Taariikhi ah
6 Tixraac iyo Linkiyo
Magaalada Seylac waxay ku taalaa waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan xeebta waqooyi ee gobolka Awdal. Magaaladu waxay xarun u tahay Degmada Saylac. Sanadkii 2008da ayaa dowlada Somaliland u magacaawdey magaalo-madaxda gobol cusub oo lagu magacaabey Selel. Bari iyo waqooyi waxaay Saylac la wadaagtaa gacanka Cadmeed, galbeed waxaa ka xiga wadanka Jabuuti, magaalada Borama waxay dhacdaa 243.3 kilomitir koonfur-bari, halka magaalada Berbera u jirto 270 km bariga magaalada Seylac. Magaalada qadiimiga ah ee Harar waxay u jirtaa 320 km galbeedka. Deegaanka magaalada Seylac waxaa uu leeyahay caro bataax coowlaan ah, taasi oo ka dhigtey magaalada lama-degaan la mood. Waxayna dhinaca u saaran tahay Banka Giriyaad ee dhaca waqooyiga gobolka Awdal, maanta lagu xisaabiyo gobolka Selel. Intaas waxaa dheer, in Seylac agagaarkeeda ku yaalaan ilaa dhowr-iyo-toban gasiiradood oo yaryar, kuwaas ooy ka mid tahay Gasiirada Saacadiin ee loogu magaca daray suldaan Saacadiin oo ka mid ahaa madaxdii boqortooyada Adal. Wado xumo iyo biyo yaraan ayaa magaalada Seylac ku haya dhibaato weyn.
Saldanadii Cadal (micno ahaan "Cadaalad") waxay aheyd boqortooyo xukumi jirtay deegaano badan oo ka tirsan Gobolka Awdal ee waqooyiga Soomaaliya, meelo ka mid ah dhulka Itoobiya iyo Jabuuti ilaa Eratareya. Boqortooyada Cadal waxey ka mid ahayd boqortooyada ugu taariikhda dheeraa uguna awooda weynaa gayiga iyo deegaanada ay dagaan dadka Soomaalida iyo agagaarkooda. In kastoo boqortooyadu ka bilaabantey magaalada taariikhiga ah ee xudunta u ahayd ee Saylac waxay saldhigyo waaweyn ku lahayd magaalada Harare iyo nawaaxigeeda. Magaalada Saylac ayay ka bilaabantey boqortooyadu ka dib ku fidey deegaanka geeska Afrika. Sanadihii 1415 ilaa 1577 ayay boqortooyada Cadal ugu awood badneyd goortaas ooy maamuleysay in ka badan shan kun oo kilomitir isku wareeg ah.
Siyaasada iyo Maamulka
Maamul Goboleedka Saylac & Lughaya ee Soomaaliya waa maamulgoboleed dhaca waqooyigalbeed wadanka Soomaaliya, kaasi oo dhinac ahaan ka tirsan dhulka maanta loo yaqaano Somaliland. Xarunta degmadani waa caasimada qadiimiga ah ee Saylac.
Maamulida iyo talada deegaanadan waxaa in badan isku heystay maamulka Somaliland, maamulgoboleedka federaalka ah ee Awdalland iyo qeybo kale oo dhamaantood sheegtay ineey si gaar ah u maamulaan deegaankaasi.
Gobolka Saylac iyo Lughaya waa maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya, waxa uuna ku yaalaa waqooyiga Soomaaliya. Magaalo madaxda gobolkaan waa Saylac.
Maabka Maamulka Zeila & Lughaya
↑ Districts of Somalia, Statoids
↑ Template:Harvnb, vol. 1.
Baki · Boorame · Boon · Bus · Jirjir · Jidhi · Xariirad · Xaliimaale · Goronyocowl
Dilla · Lughaya · Saylac · Cabdulqaadir · Magaalo Cad · Quljeed · Fardolaguxidh · Cali Xaydh · Gobolka
Weeraar · Garboraaxo · Caasha Cado · Kalabaydh · Lowyacado · Degmolaqas
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saylac&oldid=191660"